Raila Odinga oo sheegay in kulankii uu la yeeshay Uhuru aysan ka warqabin madaxda kale – The Voice of Northeastern Kenya
Raila Odinga oo sheegay in kulankii uu la yeeshay Uhuru aysan ka warqabin madaxda kale
Hoggaamiyaha urur weynaha mucaaradka Nasa Raila Odinga ayaa sheegay in kulankii 9-kii bishii saddexaad ee sanadkan dhex maray isaga iyo madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu ahaa mid qarsoodi ah.
Waxaa uu hoosta ka xariiqay in xita aysan ka warqabin madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto iyo Kalonzo Musyoka oo ka mid ah madaxda sar sare ee garabka mucaaradka ee dalka.
Raila Odinga, ra’iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa carrabka ku dhuftay inuu go’aansaday in kulankaasi aysan cid seddexaad ogaanin si aanan cadaadis loo saarin ama aysan u jirin shuruudo la isku xiro.
Sido kale waxaa uu sheegay in isaga iyo hoggaamiyaha ugu sarreeya ee dalka ay isku afgarteen inay ku dhaqaqaan qaab rasmi ah oo lagu mideynayo shacabka maadaama doorashooyinkii sanadkii hore dhacay iyo isqabqabsigii siyaasadeed ay ka dhalatay kala qeybsanaan.
Hadalkan ayuu Mr. Odinga jeediyay xili uu ku sugnaa ismaamulka Kitui iyadoo guddoomiyaha maamul goboleedkaasi Charity Ngilu ay madaxda mucaaradka ugu baaqday inay midnimo muujiyaan sido kalena ay doorashada xigta xilka madaxtinimo ku tageraan madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka Kalonzo Musyoka.
← Qaar ka mid ah xildhibaanada galbeedka dalka oo doonayo inuu xafiiska banneeyo wasiirka maaliyadda
Mid ka mid ah wakiilada haweenka oo baarlamaanka geysya hindise ku aadan in jagadaasi meesha laga saaro →